Katiinka Nikaaxa (Mangalsutra) Deepika Qoorta Ugu Jiro Imisa Ayuu Qiimo Ahaan Jooga Waa Katiinada Deepika Ranver Ku Aroosay Marwadiisana Ku Noqotay (+Sawiro) – Filimside.net
Katiinka Nikaaxa (Mangalsutra) Deepika Qoorta Ugu Jiro Imisa Ayuu Qiimo Ahaan Jooga Waa Katiinada Deepika Ranver Ku Aroosay Marwadiisana Ku Noqotay (+Sawiro)
Hindida dhaqan gooni iyo caado ayee leyihiin oo ay isku guursadaan diimahooda Hindugana sheegan waana dhaqan khilaafsan dhaqanka islaamka marka loo eego.
Waxay isku guursadaan caado ahaan maraan inee ku dul wareegtaan dab shidan dushiisa 7 jeer rinji oo gabadha madax loo mariyo, fiyooro oo ay labadoodaba isku galiyaan iyo waliba wiilka oo gabadha qoorta ugu xira katiin nikaax ay ula jeedaan kaso lagu magacaabo (Mangalsutra).
Intaas markii ay sameyeen kadib ayee sheegaan inee wiilkaas iyo gabadhaas xalaal isku yihiin hadaba aan usoo noqono muhiimada maqaalkeena Deepika sidaan wada ognahay waxay hader u dhaxdaa atooraha Ranver Singh.
Kaaso ay isku guursadeen dalka talyaaniga waliba aroos qaas ah ayee halkaas ku dhigteen kuna soo aqal galeen haderse magaalka Mumbai ayee kusugnayihiin maadama ay qaban qaabinayaan xaflad arooskoda ay ugu dabaal dagi lahaayen.
Hadaba waxaa lasoo helay ama laso ogaaday qiimaha Deepika Mangalsut-keda ama katiinka qoorta ugu jiro kufadhiyo waxaa lagu sheegay 20 Lakh balse wararka dambe waxay sheegayaan in 1 Crore ay ku iibisay Deepika katiinada dahabka ah iyo dahabka kale ee qoorta ugu jira.
Sida aad sare ka arki kartaan waa katiinad dahab ka sameysan oo Ranver u xiray balse qarashka Deepika ayaa bixisya maadama dhaqankooda sidaa yahay 1 Crore ($151,515 Dollar) ayeena ka bixiya oo lacag ah katiinkaas.